यी हुन् अजय देवगन र काजोलकी छोरी न्यासा, किन बन्न चाहन्नन् अभिनेत्री ? – Medianp
यी हुन् अजय देवगन र काजोलकी छोरी न्यासा, किन बन्न चाहन्नन् अभिनेत्री ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, पुष ३०, २०७४११:०४
काठमाडौ, ३० पुस । अहिले बलिउडमा स्टार किड्सको समय चलिरहेको छ । भारतीय मिडियामा पनि स्टार किड्सका नयाँ खबर आइरहेका छन् । कोही स्टार किड्स बलिउडमा डेब्यू गर्ने तयारीमा छन् । तीनीहरुले अहिले सबैको ध्यान तानिरहेका छन् । चाहे शाहरुख खानका बच्चा हुन्, या सैफ अली खानका बच्चा नै किन नहुन् ।
यही अवस्थामा ‘सिंघम’ अजय देवगनकी छोरी न्यासा पनि विस्तारै चर्चामा आइरहेकी छन् । अक्सर मिडियामा उनका खबर आइरहन्छन् । अहिले उनी क्यामेराको अघि आएर सहजरुपमा प्रस्तुत हुन थालेकी छन् । न्यासाले बलिउडमा कदम राख्लिन ? यसको उत्तर निकै कठिन छ ।
तर उनी चाँडै बलिउडमा लन्च हुने अनुमान गरिएको छ । उनी मम्मी काजो र बाबा अजयका साथ कुनै न कुनै स्पटमा देखिने गरेकी छन् । उनलाई धेरैले बलिउडमा चाँडै देख्न पाउने बताइरहँदा उनलाई भने अभिनयप्रति रुची छैन । न्यासाले अभिनय भन्दा फरक अर्को एक प्लानमा रहेको र त्यसैमा भविष्य बनाउन चाहेको बताइन्छ ।
एमाले युवा नेताको ‘टार्गेट’ मा योगेश भट्टराई ! भन्छन्, ‘ओलीको गुलामी गरेर मन्त्री बन्दिनँ’
दुई पत्नीसँग खाना खाएको आमरिको तस्विर भाइरल !
शुक्रबार सिनेमा हलमा तीन चलचित्र, ‘सुश्री सम्पत्ति’, ‘डोली’ र ‘कथा ७२’ बीच भिडन्त
अक्षय कुमारको करियरमा ग्रहण लगाउँदै अजय ! गर्दैछन् यस्तो काम(भिडियो रिपोर्ट)
फिल्म ‘केदारनाथ’ लाई दर्शकले रुचाएको भन्दै अभिनेत्री साराले दिइन् नेपालीलाई धन्यवाद
यी हुन् विश्वकै उत्कृष्ट फिगर भएकी अभिनेत्री ,जसकोे फिगरले तपाईको मनै लोभ्याउनेछ (तस्विरसहित)